अभिभावकले बुझ्नै पर्ने कुरा : आजका बालबालिकालाई मिदास इक्लास किन ?
हामीकहाँ अझै पनि जाँच पास गर्नु र सर्टिफिकेट लिनुलाई पढेको वा बुझेको मान्ने चलन छ। थाहा पाएर वा नपाएर त्यसै अनुरुप विद्यार्थीले पनि आफूलाई परिक्षा केन्द्रीत भएर तयारी गरिरहेको हुन्छ। परिक्षा केन्द्रीत भएर गरिएको अध्ययन परिक्षा सकिएसंगै विस्तारै विर्सदै जान्छ र व्यवहारीक रुपमा प्रयोग हुन सक्दैन।
अभिभावकले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने पढ्नु वा सिक्नु भनेको आफ्नो कक्षा र विषय अनुसारको पाठ बुझ्नु, त्यसबाट ज्ञान लिनु र मनन गरी व्यवहारमा उतार्नु हो। जबसम्म आफूले पढेको पाठ राम्रोसंग बुझेर मनन गर्न सकिँदैन, तबसम्म त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिँदैन। त्यसैले पढाईलाई सहि उपयोग गर्न पढेको पाठ राम्रोसंग बुझेर मनन गरेको हुनुपर्छ। सानै देखि बुझेर पढ्ने र मनन गर्ने बानीको विकास हुन सक्यो भने मात्र ठूलो भएपछि पढाईको सहि उपयोग गर्न सकिन्छ।
यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै मिदास एजुकेशन प्रा.लि.ले बालबालिकालाई उनीहरुको कक्षामा पढाई हुने मुख्य विषयका पाठहरुलाई भिडियो, चित्र, चित्र अनुसारको आवाज र इलुस्ट्रेसनको सहायताले राम्रो संग बुझेर मनन गर्न सक्नेगरी तयार गरेको छ। नर्सरी देखि कक्षा दश सम्मका मुख्य विषयमा आधारित रहेर तयार गरिएको डिजिटल शैक्षिक सामाग्री नै मिदास इक्लास हो।
मिदास इक्लास के हो ?
नर्सरी देखि कक्षा दश सम्मका मुख्य विषयमा आधारित रहेर तयार गरिएको डिजिटल शैक्षिक सामाग्री नै मिदास इक्लास हो। नेपालको जुनसुकै नीजि तथा सरकारी विद्यालयमा पढाई हुने मुख्य विषयका किताबमा भएका सबै पाठहरुको भिडियो र गेमहरु मिदास इक्लासमा समावेस गरिएको छ। नेपालका नीजि र सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले घरमा भएको कम्प्यूटर, ल्यापटप, ट्यावलेट वा स्मार्ट फोनमा राखेर रमाउँदै हेर्न, पढ्न र खेल्न सक्ने शैक्षिक सामाग्री मिदास इक्लास विद्यार्थी संस्करण (Student Edition) हो। यसैगरि शिक्षकहरुले कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरुलाई कक्षा र पाठअनुसारका भिडियोहरु देखाउँदै बुझाएर पढाउने र सिकाउने शैक्षिक सामाग्री मिदास इक्लास विद्यालय संस्करण (School Edition) हो।
मिदास इक्लास किन प्रयोग गर्ने ?
पढ्नु भनेको जाँच पास गर्नु र सर्टिफिकेट लिनु मात्रै होईन, बरु आफ्नो कक्षा र विषय अनुसारको पाठ बुझ्नु, त्यसबाट ज्ञान लिनु र मनन गरी व्यवहारमा उतार्नु हो। जबसम्म आफूले पढेको पाठ राम्रोसंग बुझेर मनन गर्न सकिदैन, तबसम्म त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिदैन। त्यसैले पढाईलाई सहि उपयोग गर्न पढेको पाठ राम्रोसंग बुझेर मनन गरेको हुनुपर्छ। सानै देखि बुझेर पढ्ने र मनन गर्ने बानीको विकास हुन सक्यो भने मात्र ठूलो भएपछि पढाईको सहि उपयोग गर्न सक्छ। मिदास इक्लासले बालबालिकालाई उनीहरुको कक्षा अनुसारको विषयमा भएका पाठहरुलाई राम्रो संग बुझेर मनन गर्न मद्दत गर्दछ।
आजकालका बालबालिकाहरु टिभीमा कार्टुन हेर्न मनपराउँछन्। कम्प्यूटर, ट्यावलेट वा मोवाईल फोनमा भिडियो हेर्न र गेम खेल्न रुचाउँछन्। साँच्चै भन्ने हो भने उनीहरुको जीवनशैली नै डिजिटल सामाग्रीसंग बढि गाँसिएको छ। उनीहरुको यो शैलीलाई परिवर्तन गर्न गाह्रो छ। त्यसैले उनीहरुको यो जीवनशैली अनुसारकै पढ्ने सामाग्री उपलब्ध गराउनु बुद्धिमानी हुन्छ। मिदास एजुकेशनले आजका बालबालिकाको जीवनशैलीलाई ध्यानमा राखेर उनीहरुको पढाईमा रुचि जगाउने पाठ्य सामाग्री तयार गरेको छ। त्यहि पाठ्य सामाग्री नै मिदास इक्लास हो।
भर्खरै सिक्ने उमेरका बालबालिकालाई पुस्तक वा पुस्तकमा भएका चित्र र अक्षरले मात्रै ध्यान केन्द्रीत गरिराख्न गाह्रो हुन्छ। मिदास इक्लासमा भएका भिडियो, चित्र र चित्रअनुसारको आवाजले बालबालिकाको केहि मात्रामा ध्यान बढि आकर्षण गर्छ। जसले गर्दा साना नानिबाबुहरुलाई पढाउन तथा सिकाउन सजिलो हुन्छ।
बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि शब्द र वाक्यहरुको सहि उच्चारण गर्न सिकाउनु जरुरी छ। सानैमा गलत तरिकाले शव्द उच्चारण गर्नाले पछि सम्म त्यहि बानी रहन्छ। मिदास इक्लासमा बालबालिकालहरुले सिक्नुपर्ने शब्द र वाक्यहरुको सहि उच्चारण (pronunciation) छ। जसलाई सुनेर बालबालिकाले सानै उमेर देखि सहि उच्चारण गर्न सिक्छन।
सिकाईमा जति बढि शरिरका ज्ञानिन्द्रीयहरु संलग्न हुन्छन्, सिकाई त्यतिनै सहज तथा दिर्घकालीन हुनसक्छ। मिदास इक्लासमा श्रब्य दृश्य पाठ्य सामाग्री भएको हुनाले यसको प्रयोग गरी पढ्दा बालबालिकाको आँखा र कान दुबै प्रयोग हुन्छ। जसले गर्दा उनीहरुले अप्ठेरा पाठहरु पनि सजिलै बुझ्छन र उनीहरुको सिकाई दिर्घकालीन हुन्छ।
मिदास इक्लासमा बालबालिकाले पढ्नुपर्ने हरेक पाठहरु भिडियो, इलुस्ट्रेसन, चित्र र चित्र अनुसारको आवाज प्रयोग गरी विस्तृतमा बुझाइएको हुन्छ। जसलेगर्दा सबै विद्यार्थीले आफ्ना पाठहरु सजिलै बुझ्न सक्दछन्।
विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने प्रत्येक पाठहरुलाई व्यवहारिक रुपमा(practically) देखाउन कठिन हुन्छ। तर त्यस्ता पाठहरुलाई मिदास इक्लासमा एनिमेशन प्रयोग गरेर देखाईएको छ। जसले विद्यार्थीलाई बुझ्न मद्दत गर्दछ।
मिदास इक्लासमा राखिएका पाठअनुसारको गेमहरु खेल्दै सिक्दा उनीहरुले छिटो र सजिलै बुझ्न सक्छन र उनीहरुको सिकाई दिर्घकालीन हुन्छ।
सामान्यतया धेरैजसो बालबालिबाले शिक्षक, शिक्षीका र अभिभावकको रेखदेखमा मात्रै पढाईमा ध्यान दिने गर्छन। मिदास इक्लासमा भएका पाठ अनुसारका गेम, भिडियो, चित्र र चित्रअनुसारको आवाज, एनिमेनशन र इलुस्ट्रेसनले बालबालिकाको ध्यान आकर्षित गर्छ। यी सामाग्रीको प्रयोग गरी पढ्दा रमाइलो हुने भएकोले बालबालिका थप उत्सुक हुन्छन्। उत्सुकताले रुचि बढाउँछ, यसबाट बालबालिकाको स्वअध्ययन गर्ने बानीको विकास हुन्छ।
मिदास इक्लास कहाँ पाईन्छ ?
देशका मुख्य सहरका पुस्तक, कम्प्यूटर र मोवाईल पसलमा मिदास इक्लास सजिलै पाइन्छ। देशभरिको कुनैपनि ठाउँबाट मिदास एजुकेशन कार्यालयमा सम्पर्क गरेर अर्डर गर्न सकिन्छ साथै होम डेलीरीको पनि व्यवस्था छ। यसका साथै हाम्रो वेब साइट www.midaseclass.com मा Purchase गरि Download गर्न सकिन्छ।
मिदास इक्लास किन्नु अघि नै यसमा के के राखिएको छ भन्ने कुरा कसरी जान्न सकिन्छ ?
मिदास इक्लासको आधिकारीक वेबसाइट www.midaseclass.com मा मिदास इक्लासमा समावेश गरिएका कक्षा र विषय अनुसारका च्याप्टर र टपीकहरुको लिष्ट राखिएको छ। साथै मिदास इक्लासमा समावेश गरिएका केही पाठहरुको भिडियो र गेमहरु (Sample) हाम्रो वेबसाईटबाट निःशुल्क डाउनलोड गरेर हेर्न, पढ्न र खेल्न सकिन्छ। साथै गुगल प्ले स्टोरबाट पनि यसलाई (Sample) निःशुल्क इन्ष्टल गर्न सकिन्छ।
मिदास इक्लास कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
मिदास इक्लास डिभिडिमा उपलब्ध छ। यसलाई हाम्रो आधिकारीक वेबसाइट www.midaseclass.com वा Play Store बाट download गर्न पनि सकिन्छ। मिदास इक्लास कम्प्यूटर, ल्यापटप, ट्यावलेट वा स्मार्ट फोन (Windows and Android) मा Install गरि Register गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई Install तथा Register र प्रयोग गर्ने तरिका (User Manual) मिदास इक्लास (Student Edition) को डिभिडिसंगै उपलब्ध भएकोले विद्यार्थी वा अभिभावकलाई प्रयोग गर्न कुनै कठिनाई व्यहोर्नु पर्दैन। कठिनाई भएमा मिदास एजुकेशनको कार्यालयमा विहान ७ बजेदेखि बेलुकी ९ बजे सम्म सम्पर्क गरेर सहयोग लिन सकिन्छ।
मिदास इक्लासले अभिभावकलाई कसरी सहयोग पुर्याउँछ ?
हरेक आमा बाबुले आफ्ना छोराछोरिहरुलाई पढाउन वा सिकाउन चाहन्छन तर सबै पाठ आफैंले बुझ्न नसक्दा असजिलो महसुस गरि राखेको देखिन्छ। आफ्नो पालामा पढ्दा राम्ररी नबुझ्नु र महसुस गर्न नसक्नुले यस्तो असजिलो भएको हो। साना कक्षाहरुको पाठ सिकाउन प्रायः अभिभावकहरु सफल पनि हुन्छन, तर छोराछोरीको कक्षा बढ्दै जाँदा अभिाभावकको अप्ठेरो पनि बढ्न थाल्छ । मिदास इक्लासको प्रयोग गरेर पढाउँदा आमा बाबुले आफूले सजिलै बुझेर आफ्ना छोराछोरिहरुलाई पढाउन वा सिकाउन सक्छन्।
आफ्नो बच्चा राम्रो पढेको छ, पास भएकै छ, किन चाहियो मिदास इक्लास ?
सर्सर्ती हेर्दा, आफ्नो बच्चा पढ्न गएकै छ, घरमा होमवर्क गरेकै छ, राम्रै अंक ल्याएर पास भएकै छ भन्ने कुरा कति अभिभावकलाई लागेको हुनसक्छ। तर स्कुलको पढाई त्यतिमात्रै हो त ? अबस्य होईन। बालबालिकाहरुले सानोमा पढेको कुरा उसको जीवनमा उपयोगी भएको हुनुपर्छ। त्यसका लागि उसले पढेका हरेक पाठ बुझेर मनन गरेको हुनुपर्छ। सानै देखि बुझेर पढ्ने र मनन गर्ने बानीको विकास हुन सक्यो भने मात्र ठूलो भएपछि पढाईको सहि उपयोग गर्न सक्छ। मिदास इक्लासले बालबालिकालाई उनीहरुको कक्षा अनुसारको विषयमा भएका पाठहरुलाई राम्रो संग बुझेर मनन गर्न मद्दत गर्दछ।
फरक फरक नीजि स्कुलमा फरक किताब पढाई हुन्छ, मिदास इक्लासले कसरी समेट्न सक्छ ?
नेपालका सबै नीजि विद्यालयमा पढाई हुने हरेक पुस्तक, नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको पाठ्यक्रम अनुशार तयार पारिएको हुन्छ र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट नै स्वीकृती प्राप्त गरेको हुन्छ। तर पनि केही पुस्तकहरुमा केही थप पाठहरु हुनसक्छन्। त्यसैले मिदास इक्लासमा नेपालका विद्यालय स्तरका प्राय सबै पब्लिकेशनले समेटेका च्याप्टरहरु समावेश गरिएको छ र मिदास इक्लास पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृती प्राप्त थप पाठ्य सामग्री हो।
मिदास इक्लास सबैको पहुँचमा छ त ?
हालको अवस्थामा संचारको साधनको रुपमा मोवाईल फोनको प्रयोग सबैको पहुँचमा पुगेको पाइन्छ। त्यसमा पनि सामाजिक संजालको प्रयोग गर्न स्मार्ट फोनको प्रयोग भएको देखिन्छ। सुचना आदानप्रदान र सामाजिक संजालमा जोडिन प्रयोग भएको साधनलाई नै प्रयोग गरेर मिदास इक्लासलाई पनि प्रयोग गर्न सकिने भएका कारणले यसको पहुँच सबैमा भएको छ भन्न सकिन्छ। मिदास एजुकशनले सबै वर्ग क्षेत्रका विद्यार्थीमा मिदास इक्लास पुगोस भनेर कम्प्यूटर, ल्यापटप र ट्यावलेट बाहेक साधारण एन्ड्रोईड फोनमा पनि राखेर हेर्न र खेल्न मिल्ने बनाएको छ । बाबालिकाले बेला बेलामा बा आमाको फोन मागेर अरु खाले गेम खेलिरहेकै हुन्छन् भने पढनपाठनका लागि पनि अभिभावकको फोन प्रयोग गर्न नसकिने कुरै भएन।
मिदास इक्लासको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने तरिका पनि होला नि?
हरेक अभिभावक वा बालबालिकालाई मिदास इक्लास प्रयोग गर्न रेखदेख गर्नुहुने सदस्यले मिदास इक्लासको प्रभावकारी प्रयोग सम्बन्धी जानकारी राख्न जरुरी छ। तब मात्रै यसले बालबालिकाको सिकाईमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
मिदास इक्लासको प्रभावकारी प्रयोगकालागि ख्याल गर्नु पर्ने कुरा एक एकगरि हेरौं :
१: कक्षामा पढाएको वा पढाउन लागिएको पाठको मात्र भिडियो देखाउने। बालबालिकालाई एकै पटक धेरै पाठको भिडियो देखाईयो भने उनीहरुलाई पछि यस प्रति आकर्षण कमहुन सक्छ। पढाई भएको वा हुन लागेको पाठलाई केन्द्रीत गर्नुपर्छ।
फाईदा : पढेका कुरा भिडियोमा हेरेपछि किताबको लाईन पढ्दा, ती कुराको भिडियोमा देखाईएको कुराले सम्झन र बुझ्न मद्धत गर्छ, ए यो भनेको त यस्तो पो रहेछ भनेर पाठमा पढाईएको कुराको चित्र स्थापित हुन्छ। मनमा बस्छ। किताब पढ्दा नबुझिएको कुरा खुलस्त हुन्छ।
२: कक्षामा पढाएको वा पढाउन लागिएको भिडियो हेरिएको पाठ पढ्ने। पढ्न लगाउने।
फाईदा : मिदास इक्लासमा भिडियोमा हेरिएको पाठ पढेपछि अक्षर, शव्द र लाईनहरु र भिडियोमा देखाईएका सम्बन्धीत चित्रको मेल खान जान्छ, भिडियो हेर्दा नुबुझिएको कुरा खुलस्त हुन्छ।
३ : गेम खेल्ने/खेलाउने। भिडियोमा हेरीएको र किताबमा पढिएको पाठसंग सम्बन्धीत गेम खेल्दा वा खेल्न दिंदा थप स्पष्ट हुन्छ।
फाईदा : किताब पढेको र भिडियो हेरेको कुराहरु नै गेममा पनि आउने भएकोले, मजा लिँदै गर्दा पनि त्यहि पाठको पुन: सम्झना ( रिकल) हुन्छ। त्यहि पाठ, त्यहि परिवेससंग बालबालिकाले अन्तरक्रिया गरिरहेका हुन्छन्। यसरी खेल्दा, स्मरण र मननका लागि थप मद्धत पुग्छ।
४: बुझेको कुरा लेख्ने। भिडियो हेर्ने, किताब पढ्ने र गेम खेल्ले गरेपछि त्यसबाट बुझेको कुरा कापीमा लेख्ने वा उतार्ने काम गराउनुपर्छ। होमवर्क गराउने वा प्रष्नोत्तरको काम पनि यतिखेरै गराउनु पर्छ।
फाईदा : यसरी लेख्ने बानीले बुझेको कुरालाई लेखेर उतार्ने क्षमताको विकास हुन्छ। परिक्षाका लागि पनि सजिलो हुन्छ भने; हेर्ने, पढ्ने, खेल्ने र लेख्ने काम क्रमश गर्दा बालबालिकाले मनन् गरिसकेका हुन्छन्।